Global Voices teny Malagasy » Angolà: Miatrika Fitsaràna Momba Ny Fanadihadihana Ny “Diamondra Mihoson-drà” Ilay Mpanao Gazety Nahazo Loka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2015 12:14 GMT 1	 · Mpanoratra Nani Jansen Reventlow Nandika Tantely
Sokajy: Angola, Paortiogaly, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nandray anjara tamin'ny fanaovana ity tatitra ity i Jonathan McCully.
Ny volana lasa teo, nomena ny Lokan'ny Fitorohana ny Famerana ny Fahalalahana Miteny an'ny fanaovan-gazety  i Rafael Marques de Morais, noho ny “fanaovan-gazetiny mihatra amin'ny fiainana, hafa noho ny an'ny rehetra ary ny fanadihadiana nataony tsy nisy fahadisoana” ao amin'ny firenena niaviany, ao Angolà. Rahampitso, ho tsaraina amin'ny fiampangàna maro anà fanalam-baràka melohan'ny lalàna, noho ny asany amin'ny maha mpanao gazety azy izy.
Tamin'ny kabarim-panekeny, niresaka ny finoany amin'ny ” herin'ny fiombonana” i Marques de Morais, ary nanolotra ilay loka ho an'i Eskinder Nega sy i Reeyot Alemu, ireo mpiara-miasa aminy any Etiopia , izay manefa ny saziny any am-ponja ankehitriny noho ny fampiasàn'izy ireo ny zony amin'ny fahalalahana miteny.
Mpanao gazety malaza momba ny fanadihadiana i Marques de Morais, any Angolà, efa maherin'ny roapolo taona izay, niara-niasa tamin'ireo mpampiely vaovao teo an-toerana sy maneran-tany , ho fanampin'ny vohikalany manokana an'ny fanadihadiana, Maka Angola . Ny anton'ny hitsaràna azy dia noho ilay bokiny “Blood Diamonds” (Diamondra Mihoson-drà): ny Kolikoly ary Fampijaliana any Angolà, izay nosoritana tsy sahala amin'ny asa matotra anà fanadihadiana amin'ny fanaovan-gazety fotsiny, fa asa mivaingana amin'ny fanairana ny zon'olombelona ihany koa. Milaza fanitsakitsahana ny zon'olombelona maro nataon'ireo miaramila jeneraly Angolane, tamin'ireo asa fitrandrahana diamondra ao amin'ny firenena, ilay boky, nanome fahazavana lehibe tamin'ny sehatra izay tsy dia resahina matetika amin'ny toekarena Angolane. Ho vokatr'ireo nitanterany ireo olana ireo, miatrika fitarainana fangatahana 1.600.000 dolara sy famonjàna mandritra ny sivy taona i Marques de Morais. Sazy mihoapapana ireo, noho ny fampahafantarana ireo vahoaka ny fanitsakitsahana lehibe ny zon'olombelona. Manombola ny 23 Aprily ny fitsaràna azy, ao amin'ny Fitsaràm-paritanin'i Luanda ao Angolà.
orofo Teo Aloha Amin'ilay Loharanom-baovao Goavana
Tsy vaovao amin'io fomba famoretana io i Marques de Morais. Efa intelo tamin'ny taona 1999, nanortara lahatsoratra goavana momba ny Filoham-pirenena Dos Santos, tao amin'ny gazety an-tsoratra tsy miankina Angolane, Agora, izy. Nilaza izy fa tompon'andraikitra tamin'ny “fahapotehan'ny firenena” ny filoham-pirenena, ary niampanga azy amin'ny fampiroboroboana ny tsy fahaizana sy ny kolikoly amin'ny fiainana ara-politika. Nampidirina am-ponja 43 andro tsy nisy fanamelohana i Marques de Morais, ary avy eo nohenjehina ary ny farany hita ho meloka tamin'ny “heloka fandratràna” ny Filoha, nomena famonjàna sazy niantona enim-bolana ary natao nandoa onitra.
Nahatsapa ny Kaomity Miaro ny Zon'olombelona UN  fa ireo fahenjanan'ireo sazy avy amin'ny fanamelohan'ny lalàna ireo dia “tsy afaka jerena ho sazy mifanaraka mba hiarovana ny filaminana na ny voninahitra sy ny lazan'ny Filoha, olona fata-bahoaka, izay araka izany, miatrika tsikeram-bahoaka sy fanoherana.”
Nahazo ny loka Index on Censorship 2015. Rafael Marques de Morais, Safa Al Ahmad, Amran Abdundi, Mouad “El Haqed” Belghouat (mpikambana amin'ny GV Advox) ary i Tamas Bodoky ao amin'ny Atlatszo. Sary avy tamin'i Alex Brenner ho an'ny Fitorohana ny Famerana.
Diamondra Mihoson-drà: Kolikoly ary Fampijaliana any Angolà
Nandritra ny voalohandohan'ny taona 2000, nanao fikarohana momba ny varotra diamondra mampifanditra any Angolà i Marques de Morais, ary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tsy asian-dresaka ao Lunda, faritanin'i Angolà. Ny taona 2011, namoaka ny “Diamantes de sangue” izy: Corrupção e tortura em Angola (Blood Diamonds: Kolikoly sy Fampijaliana any Angolà) tany Portogaly. Ilay boky dia nitanisa antsipirihany ireo famonoana notanterina, fampijaliana, fampitahorana ary ny fibodoana ireo tany nohajarian'ireo mponina, mihoatra ny 18 volana, any amin'ny toerana fitrandrahana diamondra any amin'ny faritany Lunda. Ahitana ireo tatitra vaovao tsy fahita anà tranga miisa 500 mikasika ny fampijaliana ary famonoana miisa 100. Araka ilay boky, niray tsikombakomba tamin'ireo fanitsakitsahana ireo, ireo mpiambina avy amin'ny orinasa tsy miankina momba ny fiambenana ary ireo jeneraly maro ao amin'ny Hery Mitam-piadiana Angolane.
Ny volana Novambra 2011, nametraka fitoriana mombanà heloka melohan'ny lalàna i Marques de Morais, tao Luanda, niampanga jeneraly Angolana sivy ho nanao heloka famonoana vahoako ary kolokoly mifandray amin'ny asa fitrandrahana diamondra izay atao ao amin'ny faritanin'i Lunda. Anefa tsy nanaiky nandray ilay fitarainana ny biraon'ny Filoha Mpampanoa, nilaza fa “tsy manan-danja” ireo loharanom-baovao nomen'ireo olona niharan-doza, satria izy ireo “tsy nanome loharanom-baovao vaovao” mihoatra ny zavatra nolazain'izy ireo tamin'i Marques de Morais ho an'ny bokiny.
Fizotry ny Raharaha ady heloka bevava any Portogaly, Angolà
Ny taona 2012, nametraka fitoriana mombanà heloka melohan'ny lalàna anà fanalam-baràka ny vondrona jeneraly Angolane, nitory an'i Marques de Morais, tany Portogaly noho ilay boky. Ny 11 Febroary 2013, tsy nahazo fahafahampo ireo jeneraly nametraka ilay fitoriana raharaha melohan'ny lalàna, nisafidy ny tsy hanohy ny raharaha  ny Sampana Fitsaràna Portogay, nilaza fa “tsy ny hanafintohina mihitsy, fa ny hampahafantatra” ny fikasàn'i Marques de Morais. Ny volana Marsta 2013, nitondra ny raharaha fitoriana teo amin'ny ady heloka tsotra indray ireo jeneraly, tao amin'ny fitsaràna Lisbon, nangataka onitra mitentina 400.000 dolara noho ireo fanambaràna lazainy fa fanalam-baràka, natao tao amin'ilay boky.
Raha mbola teo an-dàlana ny fizotry ny raharaha ady heloka tsotra tany Portogaly, ny 3 Aprily 2013, nantsoin'ny Sampana misahana ny Heloka Voaomana an'ny Mpitandro ny Filaminana Nasionaly any Luanda, Angolà, hanaovana fametraham-panontaniana i Marques de Morais. Nampiantsoina tsy nisy taratasy fampilazàna izy, nanontaniana tsy teo anatrehan'ny mpisolo vava-ny, ary tsy nolazaina ny fihavian'ireo porofo nangonina manohitra azy. Taorian'ny fihaonana sy fanenjehana tsy ara-dalàna maro, nolazaina ny farany i Marques de Morais fa atao ny volana Desambra 2014 ny fitsaràna azy. Nahemotr'ireo manam-pahefana Angolane moa ny farany io fangalàna am-bavany azy io, tamin'ny fanandramana hita mazava, mba nandresy lahatra ireo mpanara-maso avy any ivelany ary ireo vahoaka sasany mba hanatrika ilay fitsaràna azy.
Tokony Hanaraka ny Fifanarahana Afrikàna amin'ny Zon'olombelona i Angolà
Ny faran'ny taona 2014, namoaka lalàna ny Fitsaràna Afrikàna amin'ny zon'olombelona sy ny vahoaka , fa ireo sazy famerana dia tokony ampiasaina amin'ny fanakorontanana hita soritra amin'ny fahalalahana miteny ihany, izay mbola amin'ireo tranga tena voafetra ihany koa, sahala amin'ny hoe fiantsiana fankahalàna na fanaovana herisetra. Nilaza ihany koa io fa ireo sazy rehetra izay avy amin'ny heloka bevava, tafiditra ao ireo raharaha sivily, dia tokony ilaina tokoa ary hifanaraka amin'ilay heloka.
Mitady ny hanasazy an'i Marques de Morais amin'ny lalànan'ny heloka bevava an'ny fanalam-baraka ireo manam-pahefana Angolane, izay mametraka fanoherana mazava ny zo amin'ny fahalalahana miteny. Ekena ao amin'ny lalàna andiany faha 9 ao amin'ny Fifanarahana Afrikàna io zo io, izay tsy maintsy arahana any Angolà, araka ny fanambaran'ny Fitsaràna Afrikana. Tsy hoe miatrika sazy famerana ny fahalalahany mandritra ny sivy volana fotsiny izy noho ny fitaterany ireo olana amin'ny tombotsoam-bahoaka, fa tsy nisy antony ara-dalàna naroso ihany koa hoe inona ny antony hitadiavan'ireo manam-pahefana sazy henjana toy izany.
Ny raharaha Marques de Morais dia fampisehoana mazava ny fanohizan'i Angolà ny hetsika famoretana amin'ireo izay mampiasa ireo zo-ny, amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ho amin'ny tanjona famoaham-baovao ara-dalàna. Ny tantarany dia manazava ireo sazy amin'ny heloka bevava izay matetika tsy mifandanja, izay mety homena ireo mitady hiteny mivantana ny kolikoly sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any Angolà. Manantena izahay fa ny fitsaràna Angolana dia hanaraka ireo fanekena nataony araka ny Andininy faha 9 an'ny Fifanarahana Afrikana rehefa hihaino ny raharaha izy ny 23 Aprily 2015. Kanefa fantatray ihany koa fa mbola tena marefo ny toerana'i Marques de Morais.
I Jonathan McCully ny Mpampiatrano ary Masoivoho Mpanohana ny Tetikasa amin'ny “Media Legal Defence Initiative (MLDI)(Fandraisan'andraikitra Fiarovana ireo Media amin'ny Lalàna), fikambanana mpanohana ara-dalàna maneran-tany izay manampy ireo mpanao gazety, mpitoraka bilaogy, ary ireo media tsy miankina; miaro ireo zo-ny, amin'ny fanomezana azy ireo fanampiana ara-bola ary fanohanana amin'ny tena fifandirana. I Nani Jansen  no Tale Ara-dalànan'ny MLDI.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/23/69570/
 Lokan'ny Fitorohana ny Famerana ny Fahalalahana Miteny an'ny fanaovan-gazety: http://www.indexoncensorship.org/2015/03/indexawards2015-speech-rafael-marques-de-morais/
 ireo mpiara-miasa aminy any Etiopia: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2013/10/16/ethiopian-journalists-challenge-anti-terrorism-law/
 Kaomity Miaro ny Zon'olombelona UN: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f83%2fD%2f1128%2f2002&Lang=en
 nisafidy ny tsy hanohy ny raharaha: http://makaangola.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6311:english-blood-diamonds-angolan-generals-defeated-in-court-case-in-portugal&catid=28&lang=en
 namoaka lalàna ny Fitsaràna Afrikàna amin'ny zon'olombelona sy ny vahoaka: http://www.african-court.org/en/
 Nani Jansen: http://www.mediadefence.org/users/nani